Ku cusbooneysii WhatsApp-ka Android, sida loo helo nooca ugu dambeeya (2021) bilaash | Androidsis
Ku haynta codsiyada cusbooneysiinta nooca ugu dambeeya marwalba waa muhiim. Si kastaba ha noqotee, ma ahan in yar oo isticmaaleyaashu inay ka feejignaadaan cusbooneysiinta codsiyada sababo la xiriira dhibaatooyinka hawlgalka. Kuwa kale ma haystaan ​​cusbooneysiinta dalabka si jaahil ah darteed, sidaa darteed, waxaan kuu baran doonnaa wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato cusboonaysii WhatsApp.
Xaqiiqdii waxaad ka mid tahay kuwa rabay ku rakib WhatsApp bilaash ah sida ugu dhakhsaha badan moobiilku cusub yahay, sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la helo tan ugu dambaysa nooca la cusbooneysiiyay ee WhatsApp, kaliya maahan sababta oo ah waxaan ka maqanahay wararka lagu soo daray nooc kasta oo gaar ah, laakiin maxaa yeelay cusbooneysiinta ayaa sidoo kale keenta wararka heerka amniga, iyo asturnaanta ayaa muhiim ah, gaar ahaan marka aan dooneyno inaan ku keydinno fayrasyada ku jira Android sida kuwa annaga naga mid ah ku xayeysiinta WhatsApp.
1 Sida loo cusbooneysiiyo WhatsApp-ka Android
2 Ma cusbooneysiin karo WhatsApp
2.1 Kama cusbooneysiin karo WhatsApp boos la'aan
3 Sida loo cusbooneysiisto WhatsApp bilaash ah
4 Cusboonaysii WhatsApp Plus
5 Maxay muhiim u tahay in WhatsApp la cusbooneysiiyo?
6 Sida loo cusbooneysiiyo Webka WhatsApp
7 Sidee loo noqdaa tijaabo beta oo la tijaabiyaa nooca ugu dambeeya ee WhatsApp?
8 Sida loogu cusbooneysiiyo WhatsApp-ka APK la'aan Google Play
9 Cusbooneysiinta tooska ah ee WhatsApp ma shaqeyn karaa?
Sida loo cusbooneysiiyo WhatsApp-ka Android
Kiiska Android waa isku mid, si fudud galaya Google Play Dukaan waan cusbooneysiin karnaa arjiga, maadaama bogga koowaad uu ina tusi doono barnaamijyada ay hayaan cusboonaysiinta la heli karo waana halkaas meesha aad ka cusbooneysiin karto WhatsApp-ka Android.
Dabcan inkastoo soo dejiso whatsapp APK Waa suurtagal mid kasta oo ka mid ah ilaha caadiga ah, waa la cusbooneysiin doonaa haddii aan rakibno.
Ma cusbooneysiin karo WhatsApp
Waxaa jira sababo badan oo aan awoodi doonin inaan cusbooneysiinno WhatsApp, iyadoo kuxiran barta aan adeegsaneyno. Xaaladda Android, waxaan ku soo dari doonnaa sababaha ugu caansan ee aan u helno a khalad cusbooneysiinta Whastapp:
Hadaad aragto lambarka qaladka 413, 481, 491, 492, 921, 927 ama 941, Samee waxyaabaha soo socda:
Tirtir koontadaada Google: tag goobaha > Akoonada > Google > dooro koontadaada oo tirtir
Dib u bilow qalabkaaga si aad ugu darto koontadaada Google markale.
Nadiifi kaydka arjiga: Dejimaha> Codsiyada> Google Play Store> Kaydinta nadiifinta iyo Nadiifinta xogta.
Kama cusbooneysiin karo WhatsApp boos la'aan
Haddii aad la kulanto qaladka 101, 498 ama 910 waxaa loo yaqaan "Meel lagu keydiyo oo ku filan”, Tan tan ugu horeysa waa in la nadiifiyo keydka sidii aan horey u soo sheegnay. Haddii aadan wali awoodin, ma lihid ikhtiyaar aan ka ahayn inaad tirtirto faylasha laga helay qaybaha soo socda ee ku jira keydinta qalabka:
Faylasha fiidiyowyada waxay ku yaalliin: / WhatsApp / Media / WhatsApp Videos / Sent.
Faylasha sawirada waxay ku yaalliin: / WhatsApp / Media / WhatsApp Images / Sent.
Faylka codka ayaa ku yaal: / WhatsApp / Media / WhatsApp Voice Notes.
Khalad kale oo caadi ah ayaa ah "Faylka xirmada aan ansax ahayn ”, tan awgeed waa inaan si toos ah u soo degsano WhatsApp .apk laga helo bogga rasmiga ah ee arjiga, ka dib waxaan aadi doonnaa Settings-ka Android-ka, si aan ugu gudubno "Security" isla markaana mar aan halkaa tagno, waxaan dhaqaajin doonnaa "Ilaha aan la aqoon". Hadda waa inaan dib ugu laabannaa galka soo dejinta oo aan mar kale ku rakibnaa WhatsApp qaabkeedii ugu dambeeyay.
Sida loo cusbooneysiisto WhatsApp bilaash ah
Dhib ma leh, hab kastoo aad isticmaasho, WhatsApp gebi ahaanba waa bilaash, ee ha ka welwelin, ku cusbooneysii WhatsApp bilaash ah Sidoo kale waa suurtagal, markaa ha ka welwelin wixii cusbooneysiin ah, adeegga WhatsApp wuxuu xor u noqon doonaa nolosha.
Sidaa darteed, waxaan ku xusuusineynaa inaad ka shakiso adeeg bixiye kasta oo isku daya inuu kaa dhigo lacag bixinta beddelka rukunka WhatsApp, maaddaama aan xaqiijin karno in dalabka iyo isticmaalkiisu uu gebi ahaanba bilaash yahay, oo ka baxsan bixinta shirkaddayada beddelkeeda qorshahayaga xogta.
Cusboonaysii WhatsApp Plus
Xaaladda wax ka beddelka WhatsApp, waa inaan tagnaa soo dejinta .PK ee Whatsapp Plus inaad dib u cusboonaysiin karto. Sidaa darteed, si loo cusbooneysiiyo WhatsApp Plus waa inaan u tagnaa bixiyaha, dib u soo dejiso nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee qaabka WhatsApp oo raac tilmaamaha horumariyaha. LINKAN waxaan kaheleynaa dhamaan noocyada iyo dabcan cusbooneysiintii ugu dambeysay ee WhatsApp Plus, sidaa darteed waxaan kaliya ku qasbanaaneynaa inaan soo dejino .apk oo aan dib ugu dhigno dusha sare ee WhatsApp Plus oo horeyba loogu rakibay.
Shaki la'aan, WhatsApp wuxuu noqday codsi fariin deg deg ah oo malaayiin dad ah ay u adeegsadaan maalintooda maalin, sidaas darteed waa lagama maarmaan inaad awood u yeelatid cusbooneysii whatsapp nooca ugu dambeeya, maadaama tani ay ku siin doonto horumarin xagga waxqabadka ah, howlo cusub waxayna xallin doontaa dhibaatooyinka amniga ee suurtagalka ah ee qatartaada gelinaya sirtaada.
Maxay muhiim u tahay in WhatsApp la cusbooneysiiyo?
Had iyo jeer, WhatsApp waa la cusbooneysiiyay. Codsiga farriinta ayaa markaa soo bandhigaya horumarinno taxane ah, sida shaqooyin cusub. In kasta oo ay jiri karaan horumarin xagga hawlgalka ama amniga ah. Sidaa darteed, markii nooc noocaas ah la heli karo, waxaa muhiim ah in la cusbooneysiiyo.
Waxaa jira dhowr sababood oo ay muhiim u tahay barnaamijka sii cusbooneysii. Dhinac, inaad marin u hesho dhammaan howlaha cusub iyo hagaajinta ku soo socota. Haddii aanad cusbooneysiin, kuma raaxaysan kartid iyaga. Qaar badan oo ka mid ah astaamaha cusub ayaa kuu oggolaanaya inaad si fiican u isticmaasho WhatsApp.
Dhinaca kale, sidaan soo sheegnay, waxaa sidoo kale la soo saaray horumarin xagga amniga ah. Sidan oo kale, haysashada nooca cusub, adaa is ilaalinaya hanjabaadaha suurtagalka ah. Sidaa darteed, taleefankaaga Android wuu ka nugul yahay weerarada suurtagalka ah, fayrasyada ama khatar kasta oo kale oo waqtigaas ku jirta. Codsiga wuxuu albaab u noqon karaa taleefankeena xaalada noocan ah.
Waxaad ka cusbooneysiin kartaa WhatsApp Google Play, raadinta astaanta dalabka. Waxaad sidoo kale ka raadin kartaa cusbooneysiinta taleefankaaga Android, qeybta codsiyada ka raadi barnaamijka oo ku qasbi raadinta cusbooneysiinta. In kasta oo cusboonaysiinta badankood ay si otomaatig ah u shaqeeyaan. Marka uma baahnid inaad wax sameyso si aad u hesho.
Sida loo cusbooneysiiyo Webka WhatsApp
WhatsApp wuxuu leeyahay nooc u gaar ah kumbuyuutarka, wac WhatsApp Web. Sida nooca casriga ah, waxaa lagu cusbooneysiiyaa howlo cusub. In kastoo, adeegsadayaal badan laga yaabo inaysan garanaynin sida loo cusbooneysiiyo nooca barnaamijkan.
Caadi ahaan, markii cusbooneysiin la heli karo, waxaad heleysaa ogeysiis. Markaa waxa caadiga ahi waa inaad si fudud u gujiso xiriirka ka muuqda shaashadda. Sidaa darteed, waxaad horey u heshay marin u cusbooneysiinta noocaan. Laakiin, haddii qaabkani shaqeyn waayo ama aadan helin ogeysiiskan, waxaa jira hab kale oo aad u fudud oo dhakhso leh oo lagu helo.
Waa inaad gashaa bogga xiga. Telefoonkaaga ku lammaan oo ku fur barnaamijka taleefanka. In shabakadda waxaad heleysaa lambar QR ah, inaad u baahan tahay inaad ku akhrido taleefankaaga. Tani waxay cusbooneysiin doontaa WhatsApp Web isla markiiba. Hadda waad ku raaxeysan kartaa nooca cusub.
Sidee loo noqdaa tijaabo beta oo la tijaabiyaa nooca ugu dambeeya ee WhatsApp?
WhatsApp wuxuu leeyahay nooc beta ah, taas oo kuu oggolaan doonta inaad ka hor inta aadan cid kale tijaabin dhammaan howlaha cusub ee ku soo kordha. Haddii aad rabto, waxaad noqon kartaa tijaabiyaha beta ee arjiga. Awood u yeelashada waa wax runtii fudud. Waxaa jira dhowr tallaabo oo la raaco.
Marka hore waa inaad gashaa bogga WhatsApp Beta, oo ay tahay inaad gasho link this. Gudaha, waxaa lagu weydiin doonaa inaad gasho koontadaada Google. Markaas waxay ka muuqan doontaa shaashadda badhan oranaya "noqo tijaabiye". Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa guji badhankaas. Sidan oo kale, waxaad horey u tahay tijaabiyaha beta.
Markaad tan sameyso, waa inaad soo dejisaa nooca ugu dambeeya ee arjiga la heli karo. Kadib aad goobta Play Store. Halkaa, bogga WhatsApp, waxaad ku arki kartaa inaad horey u ahayd tijaabiyaha beta, magaca arjiga. Soo socda, ku cusbooneysii barnaamijka taleefankaaga Android. Tallaabooyinkan waxaad horayba u tahay tijaabo beta waxaadna awoodi doontaa inaad tijaabiso wararkan u imanaya barnaamijka farriinta.
Sida loogu cusbooneysiiyo WhatsApp-ka APK la'aan Google Play
Waxaa laga yaabaa inaad haysato WhatsApp APK, oo aad ka soo degsatay meel ka baxsan Google Play. Waa u suurtagal dadka isticmaala taleefannadooda aan la taageerin. Xaaladdaas, habka cusbooneysiinta dalabku xoogaa wuu ka duwan yahay.
Maaddaama aynaan marin u helin faylka ku jira Google Play sidii caadiga ahayd. Nasiib wanaag, WhatsApp lafteeda ayaa naga caawisa howsha. In uu web page Waxaan u haynaa qayb loogu talagalay qalabka Android, oo aad ka heli karto xidhiidhkan. Halkani waa meesha aad kala soo bixi karto APK.
Waxaan helnaa WhatsApp APK, oo ah nooca ugu dambeeyay ee barnaamijka. Sidaa darteed, kala soo bax faylka taleefankaaga Android oo sii wad inaad cusbooneysiiso habkaas. Haddii aad haysato nooc duug ah oo nidaamka qalliinka ah ah, oo tusaale ahaan aan mar dambe taageerin Google Play, waa habka ugu fiican. Amni ahaanshaha ka sokow.
Cusbooneysiinta tooska ah ee WhatsApp ma shaqeyn karaa?
Markaad ku rakibto WhatsApp taleefankaaga Android, codsiga badanaa waxay la yimaadaa cusbooneysiin otomaatig ah. Ma noqon karto sidaas oo kale kiiskaaga, ama in daqiiqad cayiman aad u qaabayn doonto si ka duwan sidii hore. Faa'iidada cusbooneysiinta otomaatigga ah waa inaadan waxba qaban. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad dhaqaajiso iyaga, waa wax aad u fudud.
Ku qor arjiga Play Store taleefankaaga Android. Marka xigta, muuji liiska bidix oo gal qaybta hore, oo loo yaqaan "Codsiyada iyo cayaaraha”. Next, ka tabs sare, guji ku rakiban. Codsiyada aad ku hayso taleefankaaga waxaa lagu soo bandhigi doonaa liis.
Raadi oo geli WhatsApp liiskaas. Markaad kujirto astaanta barnaamijka, dhagsii saddexda dhibcood ee taagan ee ka muuqda midigta kore ee shaashadda. Markaad sidan sameyso, dhowr ikhtiyaar ayaa ka muuqda shaashadda. Midka ugu dambeeya waa cusbooneysiinta otomaatiga ah. Haddii jaangooyuhu bannaan yahay, riix oo calaamadda cagaaran ayaa soo muuqan doonta.
Sidan ayaad ku leedahay firfircoonaan cusbooneysiinta otomaatiga ah ee WhatsApp. Marka xigta abku wuxuu leeyahay cusbooneysiin la heli karo, uma baahnid inaad wax qabato. Si otomaatig ah ayey u cusbooneysiin doontaa.